Faransiiska Oo Jabuuti ka Hirgalinaya Garoon Diyaaradeed Oo Casri ah.(Sawiro) – Awdalmedia
Faransiiska Oo Jabuuti ka Hirgalinaya Garoon Diyaaradeed Oo Casri ah.(Sawiro)
Dolwadda Jabuuti ayaa dhisanaysa garoon diyaaradeed oo ka mid noqon doona kuwa ugu casrisan uguna waaweyn geeska Afrika, kaas oo loogu magac daray madaxweynihii hore ee dalka Jabuuti, Allaha unaxariistee Xasan Guuleed Abtidoon.
Dolwadda Faransiiska ayaa fulinaysa dhismaha garoonkan, iyadoo labada madaxweyne ee Macron iyo Geelle ay dhawaan ka wadahadleen mashruucaan lagu dhisyo gegidaan diyaaradaha.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo booqosho ku tagay dhawaan dalka Faransiiska, ayaa halkaa kula kulmay dhigiisa dalkaas Emmanuel Macron, waxayna labada madaxweyne ka wadahadleen arrimo uu ka mid yahay dhismaha garoonkan oo dowladda Faransiiska ay ka caawineyso Jabuuti dhaqaalaha lagu dhisayo.
Danjiraha dowladda Faransiiska u fadhiya Jabuuti, Arnaud Guillo, ayaa sheegay in tallaabadan loogu dhisayo Jabuuti garoonka cusub ay tahay mid weyn oo u furaysa waji cusub oo xiriirka ka dhaxeeya labada dal ah.
“Waxa aan furnay bog cusub oo ku sabsaan dhismaha Garoonkan cusub, waxaan sameyn doonnaa qiimeyn qoto dheer oo ku sabsaan mashruacaan iyo kharashka ku baxaya iyo sida uu dhismaha garoonka noqon doono”, ayuu yiri Danjire Guillo.
Wuxuu intaas ku daray in qiimeynta ay samayn doonaan natiijadeedu ay noqon doonto mid wax ku ool ah.
Dowladda Faransiisku waxay ku tilmaantay barnaamijkaan lagu dhisyo garoonka diyaaraduhu mid muhiim ah oo ujeedo dhanka mustaqbalka ah laga leeyahay.
Inkasta oo muddooyinkii u dambeyay aaney dowladda Faransiisku wax mashaariic ah oo waaweyn ka fulin dalka Jabuuti, haddana waxaa muuqata in ay bilowday in dalkaas ay barnaamjiyo caaqibo leh ka fuliso, kuwaas oo loo arko wakhtigaan kuwo muhiim ah oo wax badan ku soo kordhin doono gobalka ugu yar Geeska Afrika.
Balse Cabdalla Cabdow oo ah dhaqaaleyahan reer Jabuuti ah ayaa qaba inuu dhismaha garoonka uu soo kordhinayo bilic wanaagsan, isla markaana tallaabada lagu dhisayo ay tahay aragti wanaagsan.
Balse wuxuu sheegayaan in ay jiraan waxyaabo ka wanaagsan oo uga manaafacaad badan dhalinyarada reer Jabuuti ee shaqo la’aanta haysato.
Wuxuu sheegay in dhismahaan oo kale oo ay ku baxayso lacag badan oo loo baahanyahay in laga fikiro lana eego adeegyada kale ee bulshadu u baahantahay ee baahidoodu dalka ka jirto.
Balse waxaa jira bilicda garoonkan laga dhisayo Baciidley waxyaabo ka muhiimsan bilicdaas ayaa jira ;waxaa weeyaan dalxiisayaal Jabuuti ma yimaadaan, sababtoo ah waxaa ka horreeya in la sameeyo meel dalxiis ah. Marka waa in laga fikiraa lacgata ku baxaysa iyo macaashka kaa soo galaya,” ayuu yiri Cabdalla Cabdow.
Qodobada ay Ka Taageeri-doonaan RW Rooble Guddigii Uu Xalay Magacaabay Oo la Shaaciyay(Sawiro)